Dowladda Urdun oo Amiir Xamza ku eedaysay inuu xasiloonni darro ka abuurayo boqortooyada | Saxil News Network
Dowladda Urdun oo Amiir Xamza ku eedaysay inuu xasiloonni darro ka abuurayo boqortooyada
Berbera (Saxilnews.com)Amiirkii hore ee dhaxalsugaha ahaa ee waddanka Urdun ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu iskudayayo inuu hogaamiyayaasha qabaa’ilka ka horkeeno dowladda, ra’iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi ayaa sidaas sheegay.
Amiir Xamza bin Xuseen ayaa waxa uu “kooxo ajaanib ah” kala shaqeeyay sidii xasiloonni darro loogaga abuuri lahaa qaranka, ayuu yiri Ayman Safadi.
Amiirka ayaa goor sii horraysay waxa uu shaaciyay laba muuqaal oo uu u soo diray BBCda, kuwaas oo uu ku andacoonayo in xabsi guri la galilyay.
Waxa uu iska fogeeyay inuu wax maleegay, hasayeeshee waxa uu hogaamiyayaasha Urdun ku eedeeyay musuq maasuq iyo maamul xumo.
Lix iyo toban qof, oo ay ku jiraan lataliye hore ee Boqor Cabdallah iyo xubin kale oo ka tirsan qoyska boqortooyada ayaa Sabtidii la xiray kaddib markii lagu eedeeyay inay ammaanka halis ku yihiin.
Muuqaalkiisa ayuu Amiir Xamza oo ay boqorka kala bah yihiin waxa uu ku sheegay in loo sheegay in cid uusan la xiriiri karin.
Tallaabadaas ayaa la qaaday kaddib markii uu amiirku booqday hogaamiyayaasha qabaa’ilka, halkaas oo la sheegay inuu waxoogaa taageero ah ka soo helay.
Hooyadii oo ku dhalatay waddanka Mareykanka Boqorad Nuur ayaa sheegtay inay u ducaynayso waxa ay ku tilmaantay dhibanayaasha aan waxba galabsan ee “masabidashada foosha xun” ku eedaysan.
Maxaa lagu eedeeyay amiirka?
Isagoo Axaddii ka jawaabayay khilaafka soo kala dhexgalay xubnaha qoyska boqortooyada ayuu Mr Safadi sheegay in Amiir Xamza uu muuqaallada u adeegsaday inuu xogta dhabta ah ku marin habaabiyo uuna naraxiis ku helo, sida lagu daabacay wakaaladda wararka qaranka ee Petra.
Waxa uu shirka jaraa’id ka sheegay in amiirka iyo kooxo ajaanib ah ay maleegayeen inay xasiloonni darro ka abuuraan dalka mudana lala socday dhaqdhaqaaqiisa.
XIGASHADA SAWIRKA,KHALIL MAZRAAWI
Qoraalka sawirka,Amiir Xamza oo la sawiran amiirad Basmah 2011
Amiirka ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu “hogaamiyayaasha qabaa’ilka” ka horkeenayay dowladda.
Hasayeeshee arrintaas waa “la fashiliyay”, sida Petra ay ka soo xigatay kuxigeenka ra’iisul wasaaraha oo leh.
Mr Safadi ayaa ninkaas ku eedeeyay inuu xiriir la leeyahay hay’ado ammaan oo shisheeye oo xaaska Amiir Xamza waa amiirad Basmah siiyay duulimaad ay Urdun uga baxayso. Ma uusan qeexin hay’adda amaanka ee shisheeye ee arrintaas ku lugta leh.
Waa kuma Amiir Xamza?
Qoraalka sawirka,Axmiir Xamza
Waa wiilka ugu wayn ee ay Boqorod Nuur u dhashay boqorkii geeriyooday ee Boqor Xuseen, taas oo aheyd xaaskii uu ugu jeclaa xaasaskiisa. Amiir Xamza ayaa waxa uu ka qalinjabiyay Harrow School ee UK iyo mac-hadka milateriga ee Boqortooyada ee Sandhurst ee isla UK.
Sidoo kale waxa uu wax ku bartay Jaamacadda Harvard ee waddanka Mareykanka iyadoo uu ka soo mid noqday ciidammada qalabka sida ee waddanka Urdun.
Waxaa amiirka dhaxalsugaha ah ee Urdun loo magacaabay 1999, waxaana aad u jeclaa Boqor Xuseen, kaas oo mararka qaar meelaha fagaaraha ah ku tilmaami jiray “farxaddii indhahayga”.
Sikastaba xaalku ha ahaadee waxaa loo arkay inuu aad u yaryahay oo uusan khibrad badan lahayn si loogu magacaabo inuu badelo markii uu Boqor Xuseen dhintay.
Walaalkii ay kala bahda yihiin, Cabdalla, ayaa xilkii boqortooyada loo dhiibay waxa uuna Xamza 2004-tii ka xayuubiyay xilkii amiirka dhaxalsugaha ah, iyadoo uu wiilkiisa ku wareejiyay.
Tallaabadaas ayaa waxaa loo arkayay dhabarjab ku yimid Boqorad Nuur oo mar uun rajaynaysay in wiilkeeda ugu wayn carruurteeda uu boqor noqon doono.
Muxuu amiirku sheegay?
Muuqaalkan uu soo duubay Sabtidii ayuu ku yidhi “waxaa booqasho iigu yimid taliyaha ciidanka Urdun saaka oo ii sheegay in aan la ii ogolayn in aan guriga ka baxo oo aan dadka la xidhiidho ama aan la kulmo sababta oo ah kulamo aan fadhiyey ayaa lagu dhaliilay boqorka”.
Wuxuu sheegay in aan isaga qof ahaan loogu eedayn dhaleecaynta.
Qoraalka sawirka,(Midig) Boqor Cabdallah iyo afadiisa Raaniya oo ka qayb galaya arooskii Amiir Xamsa, haweenayda dhexda ku jirtaana waa Xamse hooyadii Boqorad Nuur
Hase yeeshee isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi “anigu ma ihi qofka ka masuulka ah maamulka dumay, musuqa iyo karti darrada ka jirtay maamulka dalkeena 15 ilaa 20 sano ee u dambeeyey ee hadana ka sii daraya. Anigu kama mausul ihi in shacabku kalsooni ku qabi waayaan hay’adahooda dawladda”.
“Waxay arintu gaadhay meel aan qofna awoodin inuu hadlo ama uu aragtidiisa cabiro isaga oo aan ka baqayn in la handado, la xidho ama loo hanjabo”
Mareykanka oo cunaqabateynta ka qaaday Fatou Bensouda
Sidee ayay gabadhan “ugu faa’iidday” taajirnimo been ah oo ay ku qaraaban jirtay?
Xadhigga siyaasiyiinta sarsare waa ku dhif Urdun oo ah dal ay xulufo yihiin Maraykanka oo Bariga Dhexe ku yaal.
Dalkaasi wuxuu leeyahay nabad sugid adag oo awoodo dheeraad ah la siiyey tan iyo intii uu dilaacay safmarka fayraska korona, arintaas na waxa dhaliilay ururada u dooda xuquuqda aadanaha.
Masar, Maraykanka iyo Sucuudiga ayaa sheegay in ay taageersan yihiin Boqor Cabdallah.
Yaa kale ee la xidhay?
Qoraalka sawirka,Baasim Cawadallah
Dadka kale ee la xidhay Sabtidii waxa ka mid ah Baasim Cawadallah oo ah wasiirkii hore ee maaliyadda iyo Shariif Xasan Bin Sayd oo ka mid ah qoyska boqortooyada.
Cawadallah oo ah dhaqaaleyahan wax ku soo bartay Maraykanka ayaa ahaa nin boqorka aad ugu dhow oo saamayn weyn ku lahaa dib u habaynta dhaqaale ee Urdun.
Marar badan ayay gorodda is geliyeen isaga iyo shakhsiyaadka dawladda ku xididaystay oo diidanaa qorshihiisa dib u habaynta dhaqaale.